Stopping points from Harare, Zimbabwe to Gweru, Zimbabwe
Stopping points from Harare, Zimbabwe to Gweru, Zimbabwe:
Start from Harare, Zimbabwe
2 hours to Kadoma, Zimbabwe after driving about 90 miles / 140 km
1.5 hours to Gweru, Zimbabwe after driving about 80 miles / 130 km
Your total trip with all stops is around 170 miles / 280 km, taking roughly 3 hours for the whole trip. If you want to see every small town along the way, you can get a full list of cities between Harare, Zimbabwe and Gweru, Zimbabwe.
Start from Harare, Zimbabwe.
Kadoma, Zimbabwe is stopping point #1 after driving about 140 km (90 miles) or 2 hours.
Finally, Gweru, Zimbabwe is your destination after driving about 130 km (80 miles) or 1.5 hours. Your total trip with all stops is around 280 km or 170 miles, taking roughly 3 hours for the whole trip.